Ukuphefumlelwa kwamaphepha oPapasho Yintoni oya kuyidinga ngexesha lomsebenzi woYilo loMzobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kuqheleke kakhulu kubantu abangena kwifayile ye- ukuyila Bavakalelwa kukuba ubuchule bokuyila yenye yeempawu zabo eziphambili, nkqu nesona sipho sabo sibalaseleyo kwaye lelo lixa elininzi kwiprojekthi okanye emsebenzini ungawela kwixesha lokuma, apho kubonakala ngathi izimvo kunye nobuchule aziboniswanga. Ukuphazamiseka kunokuba nzima kakhulu kwaye oku kubangela ukuba ubuchule bungathwali siqhamo.
Kule mizuzu yokungabikho kokhuthazo sine-Intanethi apho siza kufumana amaphepha apho ukukwazi ukufumana inkuthazo yokuchwetheza. Yiyo le nto siza kuthetha ngayo kwinqaku lanamhlanje.
1 La maphepha akhuthazwayo kakhulu!
2 Amaphephandaba kunye neemagazini ezikwathetha ngokuchwetheza
La maphepha akhuthazwayo kakhulu!
Iphepha lokuqala esiza kukucebisa ngalo libiziwe Ukusuka emantla kwaye ngokusisiseko yi uyilo lwebhlog ekhuthazayo kubo bonke abantu abanomdla kuyilo lwegraphic ukwenza iiprojekthi ezintsha ngeendlela ezahlukeneyo, ezisoloko zipapashwa. Umsebenzi ungowangoku kwaye ungowangoku ukuze ube neembono ezahlukeneyo zokhetho kubuchwephesha.
Uhlobo olulungileyo lelinye iphepha elilunge kakhulu indawo ephefumlelweyo ye-intanethi apho unokufumana khona imisebenzi eyahlukeneyo evela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, apho ubhaliso lusimahla, kunye nokuthatha inxaxheba, ke unokuba negalelo kumbandela wakho Ukuqhubeka nokudala inkuthazo kwabanye abayili bemizobo. Eli phepha linokusetyenziswa ngaphandle kobhaliso njengoko ubhaliso lufunwa kuphela ukuthatha inxaxheba kwintsebenziswano yoyilo.
Iphepha uhlobo ikwayintsika yewebhu Inkuthazo kuyilo lwegraphic kwaye kukuba ngokusisiseko eli phepha lenziwe ngabaqulunqi begraphic, apho unokufumana khona inani elikhulu leegalari ezivela kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo, ezinje ezona portfoliyo zewebhu zibalaseleyo iisayithi ze-ecommerce, ezona ndawo zibalaseleyo zebhlog, kunye noyilo olululo lwewebhu olunesitayile esincinci.
Ukuba ufuna kuphela ukufaka iphepha apho ufumana kuphela iigalari kwaye unokuthatha inxaxheba kwintsebenziswano, emva koko sincoma sithanda typography. Ukuba awukhangeli ukukhuthazwa komsebenzi othile, kodwa ukuba uyafuna ukufezekisa ukugqwesa kwi-typography kunye noyilo lwegraphic, emva koko iphepha Uhlobo lwabalawuli beklabhu yile nto uyikhangelayo. Eli phepha ngumbutho wehlabathi jikelele ofuna ukuphucula ubugcisa babaqulunqi bemizobo kunye nokubakhuthaza ukuba babe ngcono kwaye benze ngcono kwinto abayenzayo, kunye nabavelisi bomxholo obalaseleyo.
Amaphephandaba kunye neemagazini ezikwathetha ngokuchwetheza
Uhlobo lweTheory kwelinye icala, liphephandaba elenziwe e-Oklahoma, EUnited States, apho iimbono ezahlukileyo, iindaba, udliwanondlebe kunye nokugxekwa kobuchwephesha, kunye nemibono emitsha yoyilo lwegraphic iyenziwa. Uhlobo lweentlobo.info Ibhlog eyenziweyo eJamani, enegunya lokuqonda indawo, ubuchwephesha, imiqondiso kunye nezinye izihloko zoyilo.
Kokungeniswa okuchwetheze okwahlukeneyo ngeSpanish, kunjalo UDon serifa, apho uya kuba nakho ukufumana umxholo owahlukileyo kuyilo lwegraphic, kunye nokuphefumlelwa kwetypography. Kule bhulogi kungeniswa ngeveki okanye rhoqo kwiiveki ezimbini, ngokungafaniyo uninzi lwethu esichazile ukuba lwenziwa mihla le.
Abanye abafana abanzima Ingavakala njengegama lenyathelo elitsha lomdlalo bhanyabhanya, kodwa ayisiyiyo, njengephepha lewebhu elinokungeniswa ngumyili funda ngakumbi ngakumbi kuyilo lwegraphic kwaye eyona ilungileyo, malunga ne-typography. Into enomdla malunga noku kukuba eli phepha lipapasha imibhalo yalo ngeSpanish, ngokungafaniyo namaphepha ewebhu apapasha umxholo wawo ngesiNgesi kuba i-United Kingdom kunye ne-United States ngawona mazwe ahambele phambili ngokubhekisele kwintengiso kunye noyilo lwegraphic.
Ekugqibeleni, Siza kucebisa iakhawunti yeTrumblr ebizwa ngokuba ifonti yam endiyithandayo, apho unako yabelana ngamagama osetyenziso lobungcali, Kodwa iqulethe iphepha-mvume, asimahla, kunye nokusebenzisa iifonti ezahlukeneyo ezikulo ngokusemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ukuphefumlelwa kwamaphepha oPapasho Yintoni oya kuyidinga ngexesha lomsebenzi woYilo loMzobo
Olu buchwephesha lubalulekile njengokwenza ilogo yesiko. Ndikutsho oku kuba ukuba unayo ilogo kwaye ayihambelani nefonti, inokuyonakalisa le projekthi. Umzekelo, ukuba ilogo yetekhnoloji yenzelwe, ubuchwephesha kufuneka bulandele lo mgca, ewe ngaphandle kokuwutyeshela umbala ukuze ulungelelanise
Zonke ezi nkcukacha kufuneka zithathelwe ingqalelo ngaphambi kokuthatha i-odolo yeprojekthi, kwaye ndicebisa ukuba inkqubela phambili ihanjiswe ngaphambi komhla wokugqibela wokuhanjiswa, ukuze kugqitywe umsebenzi ngexesha ngaphandle kokungxama kwaye kulungiselelwe umthengi.
Ndiyalikhumbula ikhonkco lamaphepha, uninzi lwazo kulula ukuzifumana kodwa eyokuqala, evela emantla, ayiveli kum naphina.